အဒဲလျတာရကျဘျကို ပရိသတျတှေ မှတျမိကွဦးမယျထငျပါတယျ။ အင်ျဂလိပျဘောလုံးလောကအကွောငျး နညျးနညျးလောကျဖွဈဖွဈ သိသူဆိုရငျတောငျမှ တာရကျဘျကို မှတျမိကွမှာပါ။
Adel Taarabt's great skill vs Zenit pic.twitter.com/pNcAlpUwFW
မျောရိုကိုလကျရှေးစငျ တာရကျဘျက Talent အပွညျ့ပါပမေယျ့ ကှငျးပွငျပ နထေိုငျပုံတှကွေောငျ့ တိုးတကျသငျ့သလောကျ မတိုးတကျလာတဲ့ကစားသမားဖွဈပွီး ပွောရရငျ နယူးကာဆယျတောငျပံကစားသမားဟောငျး ဘငျအာဖာလိုပါပဲ။
😱 WHAT. A. GOAL.
Adel Taarabt just loved playing against Preston North End 😍#QPRPNE #FlashbackFriday pic.twitter.com/yEiYwkV2If
— QPR FC (@QPR) December 6, 2019
သူဟာ စပါး၊ ကြူပီအာအသငျးတှနေဲ့အတူ ပရိသတျတှေ သဘောကခြဲ့သူဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ သူ့ရဲ့စကေးက သတိထားမိလောကျစပေါတယျ။ အဲဒီနောကျ သူဟာ အစေီမီလနျကတဈဆငျ့ စီးရီးအရေောကျသှားပွီး အခုတော့ ဘငျဖီကာနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကို ပွနျလညျတညျ့မတျဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။
အသကျ ၃၀အရှယျရှိ တာရကျဘျဟာ ယမနျနညေ့က ဇငျးနဈအသငျးကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာလညျး ပရိသတျတှေ သတိထားမိစတေဲ့အကှကျတဈကှကျ ထုတျပွသှားပွီး ပွိုငျဘကျကစားသမားကို ပေါငျကွားထဲကနေ ထညျ့ကာ ပရိသတျတှကေို သူ့အစှမျး ပွသခဲ့တာပါ။
တာရကျဘျဟာ တောငျပံတဈလြှောကျ ဆှဲပွေးလာတုနျး ရုတျတရကျဆိုသလို အရှိနျသတျကာ ကိုယျဟနျသတျလိုကျစဉျ အနောကျမှာ ကပျပါလာတဲ့ ဇငျးနဈကစားသမားကို Nutmeg လုပျကာ ကြျောဖွတျခဲ့တာပါ။ သူဟာ အဲဒီလိုပေါငျကွားထဲကနေ ထညျ့လိုကျရာမှာ ပုံမှနျအတိုငျး ခွဦေးနဲ့ ထိုးလိုကျတာမဟုတျဘဲ ခွဖေဝါးနဲ့ အသာလေးထညျ့လိုကျတာပါ။
အဲဒီအခြိနျမှာ ပေါငျကွားထဲအထညျ့ခံရတဲ့ ဇငျနဈကစားသမား ယီရိုကငျလညျး အနောကျကနေ ဆှဲထားလို့ အဝါကတျပွသခံခဲ့ရပါတယျ။
တာရကျဘျဟာ ကြူပီအာအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးသှားတဲ့ ၂၀၁၅ နှရောသီမှာ ဘငျဖီကာအသငျးနဲ့ ၅နှဈစာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့သူဖွဈပွီး ၂၀၁၇-၁၈ရာသီက ဂြီနိုအာအသငျးကို အငှားနဲ့ သှားရောကျမကစားခငျ ဘငျဖီကာအရနျအသငျးမှာပဲ ကစားခဲ့ရပါတယျ။
အသငျးနဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပွီးနောကျ ၄နှဈအကွာ မတျလကမှ ဘငျဖီကာအသငျးအတှကျ ပှဲထှကျခှငျ့ရရှိခဲ့ပွီး တှနျဒယျလာအသငျးကို ၁-၀ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပထမဆုံးအကွိမျကစားခှငျ့ရရှိခဲ့တာပါ။ ဖူလျဟမျမှာလညျး အငှားကစားခဲ့ဖူးတဲ့ တာရကျဘျဟာ သွဂုတျလက လကျရှိလုပျခလစာထကျ ၃၀ % လြှော့ယူကာ အသငျးနဲ့ ၃နှဈစာခြုပျသဈခြုပျဆိုခဲ့ပါတယျ။
သပ်ရပ်လွန်းတဲ့ Nutmeg နဲ့ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားကို မညှာမတာချေမှုန်းလိုက်တဲ့ တာရက်ဘ်
အဒဲလ်တာရက်ဘ်ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကအကြောင်း နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် သိသူဆိုရင်တောင်မှ တာရက်ဘ်ကို မှတ်မိကြမှာပါ။
မော်ရိုကိုလက်ရွေးစင် တာရက်ဘ်က Talent အပြည့်ပါပေမယ့် ကွင်းပြင်ပ နေထိုင်ပုံတွေကြောင့် တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်လာတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီး ပြောရရင် နယူးကာဆယ်တောင်ပံကစားသမားဟောင်း ဘင်အာဖာလိုပါပဲ။
သူဟာ စပါး၊ ကျူပီအာအသင်းတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေ သဘောကျခဲ့သူဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့စကေးက သတိထားမိလောက်စေပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူဟာ အေစီမီလန်ကတစ်ဆင့် စီးရီးအေရောက်သွားပြီး အခုတော့ ဘင်ဖီကာနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ကို ပြန်လည်တည့်မတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
အသက် ၃၀အရွယ်ရှိ တာရက်ဘ်ဟာ ယမန်နေ့ညက ဇင်းနစ်အသင်းကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာလည်း ပရိသတ်တွေ သတိထားမိစေတဲ့အကွက်တစ်ကွက် ထုတ်ပြသွားပြီး ပြိုင်ဘက်ကစားသမားကို ပေါင်ကြားထဲကနေ ထည့်ကာ ပရိသတ်တွေကို သူ့အစွမ်း ပြသခဲ့တာပါ။
တာရက်ဘ်ဟာ တောင်ပံတစ်လျှောက် ဆွဲပြေးလာတုန်း ရုတ်တရက်ဆိုသလို အရှိန်သတ်ကာ ကိုယ်ဟန်သတ်လိုက်စဉ် အနောက်မှာ ကပ်ပါလာတဲ့ ဇင်းနစ်ကစားသမားကို Nutmeg လုပ်ကာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ အဲဒီလိုပေါင်ကြားထဲကနေ ထည့်လိုက်ရာမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ခြေဦးနဲ့ ထိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ခြေဖ၀ါးနဲ့ အသာလေးထည့်လိုက်တာပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ ပေါင်ကြားထဲအထည့်ခံရတဲ့ ဇင်နစ်ကစားသမား ယီရိုကင်လည်း အနောက်ကနေ ဆွဲထားလို့ အ၀ါကတ်ပြသခံခဲ့ရပါတယ်။
တာရက်ဘ်ဟာ ကျူပီအာအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ၂၀၁၅ နွေရာသီမှာ ဘင်ဖီကာအသင်းနဲ့ ၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇-၁၈ရာသီက ဂျီနိုအာအသင်းကို အငှားနဲ့ သွားရောက်မကစားခင် ဘင်ဖီကာအရန်အသင်းမှာပဲ ကစားခဲ့ရပါတယ်။
အသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် ၄နှစ်အကြာ မတ်လကမှ ဘင်ဖီကာအသင်းအတွက် ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး တွန်ဒယ်လာအသင်းကို ၁-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာပါ။ ဖူလ်ဟမ်မှာလည်း အငှားကစားခဲ့ဖူးတဲ့ တာရက်ဘ်ဟာ သြဂုတ်လက လက်ရှိလုပ်ခလစာထက် ၃၀ % လျှော့ယူကာ အသင်းနဲ့ ၃နှစ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။